Kaadị ebe nchekwa | January 2020
Isi Kaadị ebe nchekwa
Ịhọrọ kaadị ebe nchekwa maka DVR
Kaadị ebe nchekwa bụ onye na-ebu ihe na-adabaghị adaba na nke a pụrụ ịdabere na ya, bụ nke, ọ dịkarịa ala, enwere ike ịnweta DVR dịnụ. Taa, anyị ga - enyere gị aka ịhọrọ kaadi ziri ezi maka ngwaọrụ gị. Mpempe Nhọrọ Kaadị Nhọrọ ndị dị mkpa nke kaadị SD ndị dị mkpa maka ọrụ ọrụ nke onye na-edekọ akụkọ gụnyere ihe ngosi dịka ndakọrịta (usoro a na-akwado, ọkwa na-agba ọsọ), olu na onye nrụpụta.
Esi kpochapụ kaadị nchekwa
A na-ejikarị kaadị nchekwa dị ka mgbakwunye ọzọ na ndị na-eme njem, smartphones, mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ ejikere na oghere kwekọrọ. Dịkwa ka ọ bụla ngwaọrụ ọ bụla na-echekwa data njirimara, ụgbọala dị otú ahụ na-eme ka ọ jupụta. Egwuregwu oge a, foto ndị dị elu, egwu nwere ike ijide ọtụtụ gigabytes nke nchekwa.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na igwefotoadịghị achọpụta ya
Oge ụfọdụ, ọnọdụ bilitere mgbe igwefoto na-akwụsị na mberede ịhụ kaadi kaadị. N'okwu a, ọ gaghị ekwe omume iji foto. Ka anyị hụ ihe kpatara nsogbu ahụ na otu esi ewepụ ya. Igwefoto anaghị ahụ kaadị ebe nchekwa Ihe kpatara nke igwefoto ahụghị ka ụgbọala ahụ nwere ike ịbụ ọtụtụ: A kpochiri kaadị SD; nkwekọrịta dị n'etiti ogo nke kaadị nchekwa nke igwefoto; ezighi ezi nke kaadị n'onwe ya ma obu igwefoto.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa ekwughị kaadị nchekwa
N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ihe kpatara kọmputa nwere ike ghara ịhụ kaadị nchekwa, yana inye nsogbu maka nsogbu a. Kọmputa anaghị ahụ kaadị ebe nchekwa Iji dozie nsogbu ahụ, ịchọrọ ịchọta ihe kpatara ya. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ma ngwaike na ngwanrọ. Tụlee ihe ọ bụla ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa anaghị achọ SD ma ọ bụ microSD.
Iji SD, miniSD ma ọ bụ microSD kaadị nchekwa, ị nwere ike ịgbasawanye nchekwa nchekwa nke ngwaọrụ dị iche iche ma mee ka ha bụrụ ebe nchekwa maka nchekwa. O di nwute, mgbe ufodu na oru nke ndi ozo nke njehie na ihe ndaputa a na-eme, na mgbe ufodu, ha kwusiro aguta.
Ntuziaka maka igbanwe ncheta nke ama ama na kaadị ebe nchekwa
Ka anyị dokwuo anya na n'ọnọdụ a anyị na-atụle ọnọdụ ebe onye ọrụ kwesịrị iji hụ na echekwara faịlụ na mmemme na microSD. Na ntọala gam akporo, ọnọdụ ndabara na-echekwa na ebe nchekwa dị n'ime ya, ya mere anyị ga-agba mbọ ịgbanwe nke a. Iji malite, tụlee nhọrọ maka ịnyefe mmemme arụnyere ugbu a, wee - esi gbanwee ebe nchekwa dị n'ime ebe nchekwa ahụ.
Ihe ime ma ọ bụrụ na smartphone ma ọ bụ mbadamba anaghị ahụ kaadị SD
Ugbu a ọ fọrọ nke nta ka ngwaọrụ ọ bụla dị na sistemụ arụmọrụ Android na-akwado kaadị ebe nchekwa (microSD). Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ enwere nsogbu ndị metụtara nchọpụta ya na ngwaọrụ ahụ. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara nsogbu nke dị otú a, na a ga-achọkwa iji aka ha mee ihe ụfọdụ.
Atụmatụ maka ịhọrọ kaadị ebe nchekwa maka ama
Ngwaọrụ nke smartphones nke oge a ejiriwo olu dị elu, ma nhọrọ nke ịgbasawanye ebe nchekwa site na kaadị microSD ka na-achọ. E nwere ọtụtụ kaadị ebe nchekwa na ahịa, na ịhọrọ onye ziri ezi siri ike karịa ka ọ na-ele anya na mbụ. Ka anyị lee nke kachasị mma maka ama.
Ụzọ niile iji sụgharịa kaadị ebe nchekwa
A na-eji kaadị SD na ụdị ngwaọrụ kọmputa ọ bụla. Dịka eriri USB, ha nwekwara ike ịdị na-adịghị arụ ọrụ na mkpa ka a hazie ha. E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee nke a. Ihe omuma a choputara nke kachasi ha. Otu esi edepụta kaadị ebe nchekwa Ụkpụrụ nke ịkpụpụta kaadị SD abụghị ihe dị iche na ihe gbasara akpa USB.
Nbudata egwu na kaadị ebe nchekwa: ntụziaka zuru ezu
Ọtụtụ ngwaọrụ mkpado na-akwado mbido egwu egwu. Otú ọ dị, nchekwa dị n'ime ngwaọrụ ndị a adịghị ezu mgbe niile iji chekwaa egwu kachasị amasị gị. Ụzọ ọpụpụ bụ iji kaadị ebe nchekwa ị nwere ike idekọ mkpokọta egwu egwu. Otu esi eme nke a, gụọ.
Kedu ụdị klas nke kaadị nchekwa?
O doro anya na ị hụrụ ọtụtụ kaadị ebe nchekwa dị iche iche na-eche: olee otu ha si dị iche? Ọtụtụ àgwà na ndị na-emepụta ngwaọrụ nwere ike ịbụ data kachasị mkpa na ụdị draịva. N'isiokwu a, a ga-atụle ihe onwunwe ha dị ka nke na-agba ọsọ n'ozuzu ya. Ka anyị malite!
Na-eduzi okwu ahụ mgbeadịghị kaadị ebe nchekwa
Kaadị ebe nchekwa bụ ụgbọala zuru ụwa ọnụ nke na-arụ ọrụ dị ukwuu na ngwaọrụ dị iche iche. Mana ndị ọrụ nwere ike ihu ọnọdụ ebe kọmputa, smartphone ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ anaghị aghọta kaadi kaadị. Enwere ike inwe ikpe mgbe ọ dị mkpa iji kpochapụ data niile na kaadị ngwa ngwa. Mgbe ahụ i nwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịhazi kaadị nchekwa.
DVR anaghị amata kaadị ebe nchekwa
DVR aghọwo àgwà dị oké mkpa nke ọkwọ ụgbọala nke oge a. Ngwaọrụ ndị dị ka nchekwa nke obere vidiyo jiri kaadị ebe nchekwa dị iche iche na ụkpụrụ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na DVR enweghị ike ịmata kaadị ahụ. Taa, anyị ga-akọwa ihe mere nke a ji eme na otu esi emeso ya.
Naghachi data efu na kaadị ebe nchekwa
Ọnwụ data bụ nsogbu na-adịghị mma nke nwere ike ime na ngwaọrụ ọ bụla dijitalụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-eji kaadị ebe nchekwa. Kama inwe ịda mbà n'obi, ị ga-achọ iji nweta faịlụ furu efu. Naghachi data na foto site na kaadị ebe nchekwa Ozugbo ọ dị mkpa ịchọrọ na 100% nke ozi ehichapụ agaghị enwe ike ịghaghachi.
Ntuziaka mgbake na kaadị nchekwa
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-eche ọnọdụ ihu ebe kaadi nchekwa nke igwefoto, ọkpụkpọ ma ọ bụ ekwentị kwụsị ọrụ. Ọ na-eme na SD kaadị malitere inye njehie na-egosi na ọ dịghị ohere ọ bụla ma ọ bụ na ekwughị na ngwaọrụ ahụ. Ọnwụ nke ịrụ ọrụ dị otú ahụ na-emepụta nnukwu nsogbu maka ndị nwe.
Nyocha Navitel na kaadị ebe nchekwa
Onye ọkwọ ụgbọ ala ọhụụ ma ọ bụ onye njem nleta anaghịzi eche echiche onwe ya n'enweghị iji igodo GPS. Otu n'ime ngwanrọ ngwanrọ kachasị mfe bụ ngwanrọ sitere na Navitel. Taa anyị ga-agwa gị otu esi melite ngwanrọ ọrụ Navitel na kaadị SD. Imelite Navitel na Kaadị Ebe nchekwa Ka enwere ike ime usoro a n'ụzọ abụọ: iji Navitel Navigator Update Center ma ọ bụ site na imelite ngwanrọ na kaadị ebe nchekwa site na iji akaụntụ onwe gị na weebụsaịtị Navitel.
Wepu mkpọchi kaadị ebe nchekwa na igwefoto
Ọ na-eme na na oge kachasị mma na kamera njehie gosiri na ekpuchila kaadị gị. Ị maghị ihe ị ga-eme? Idozi ọnọdụ a dị mfe. Otu esi achọta kaadị ebe nchekwa na igwefoto Tụlee ụzọ ndị dị mkpa iji kpochapụ kaadị nchekwa. Nzọụkwụ 1: Wepu mkpọchi ngwaike nke kaadị SD Ọ bụrụ na ị jiri kaadị SD, ha nwere ọnọdụ mkpọchi pụrụ iche maka idebe nchedo.
Ijikọ kaadị nchekwa na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
Site n'oge ruo n'oge, enwere ike jikọọ kaadị nchekwa na PC: tụpụ foto site na igwefoto dijitalụ ma ọ bụ na-edekọ site na DVR. Taa, anyị ga-ewebata gị ụzọ kachasị mfe iji jikọọ kaadị SD na PC ma ọ bụ laptọọpụ. Otu esi ejikọ kaadị nchekwa na kọmputa. Ihe mbụ ị ga-ahụ bụ na usoro ahụ dịka otu njikọ USB flash ọsọ.
Ịga ngwa na kaadị SD
N'oge na-adịghị anya, onye ọrụ ọ bụla nke ngwaọrụ gam akporo na-eche ọnọdụ ihu ebe ebe nchekwa ebe obibi nke ngwaọrụ ahụ ga-akwụsị. Mgbe ị na-agbalị imelite dị ma ọ bụ wụnye ngwa ọhụrụ, ọkwa dị na Market Market na ezughị ezu ohere, ị ga-ehichapụ faịlụ mgbasa ozi ma ọ bụ ngwa iji mezue ọrụ ahụ.
Nduzi maka iwepụ nchebe site na kaadị ebe nchekwa
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ si gburugburu ụwa na-eche eziokwu ahụ bụ na ịrụ ọrụ na kaadị ebe nchekwa agaghị ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ bụ na echedo ya. N'otu oge ahụ, ndị ọrụ na-ahụ ozi "Disk bụ ederede ederede." O siri ike, mana ka enwere oge mgbe enweghị ozi ọhụhụ, mana ide ma ọ bụ detuo ihe nwere microSD / SD bụ ihe agaghị ekwe omume.
https://termotools.com ig.termotools.com © Kaadị ebe nchekwa 2020